Jụọ Fedora: Portal Enyemaka Ọhụrụ maka ndị ọrụ Fedora | Site na Linux
Jụọ Fedora: Portal Enyemaka Ọhụrụ maka ndị ọrụ Fedora
Banyere igba egbe nke Fedora 16 Verne, ndị mmepe nke nkesa a ekwuputala ọkwa nke a n'akụkụ oru ngo. Ọ bụ ihe Jụọ Fedora, a portal nke ndị ọrụ ga-enwe ike jụọ, zaa ma kwuo ụdị obi abụọ ọ bụla na-ebilite banyere nkesa.
N'okpuru ụka Jụọ Fedora, Fedora ọkachamara ọkachamara amalitela ọrụ dị elu nke na-enye nkwado nkwado teknụzụ maka ndị ọrụ na-eji Linux distro a.
Rahul Sundaram, otu n'ime ndị na-akwado ọrụ Fedora, kọwara na ebumnuche nke ọrụ ọhụrụ bụ "ime ka ọ bụrụ ebe kachasị mma iji nweta ozi nkwado teknụzụ gbasara sistemụ arụmọrụ."
Peeji ahụ na-arụ ọrụ na ngwa Askbot, nke na-enye ajụjụ na azịza nke mepụtara na asụsụ mmemme Python na Django.
Tupu ọbịbịa nke Jụọ Fedora, ndị ọrụ chọrọ ịnweta enyemaka teknụzụ ga-eme ya site n'aka gọọmentị Fedora IRC, ndepụta nzipu ozi ma ọ bụ nnọkọ FedoraForum.
Iji banye na Jụọ Fedora, ndị ọrụ nwere ike ịdebanye aha na Fedora ID ma ọ bụ site na OpenID, ọrụ na-enye ohere iji data eji Google, WordPress ma ọ bụ Yahoo! nyochaa na weebụsaịtị ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Jụọ Fedora: Portal Enyemaka Ọhụrụ maka ndị ọrụ Fedora
jorge antoni ramirez dijo
Enwere m nsogbu ịwụnye fedora 14 na pc m n'ihi na a chọpụtaghị kaadị netwọk (a naghị etinye kaadi netwọk).
My pc bụ ihe 9020 optiplex.
My njikọ bụ site USB ka a swich (ofu ip).
Amaghị m ma ọ bụrụ na sistemụ nrụọrụ a na ụdị a adịghị eweta nkwado maka netwọkụ.
Ị nwere ike ị nyere m aka
Zaghachi jorge antoni ramirez
Ana m atụ aro ka ị zoo ajụjụ a na ajụjụ na azịza ọrụ a na-akpọ Jụọ Site na Linux ka obodo dum nwee ike inyere gi aka na nsogbu gi.
Osman andrade dijo
Ndewo Enyi, enwere m nsogbu na Fedora 20, ọ na-awụnye ngwugwu PHP niile, MySQL, PHPMyadmin, ebe nrụọrụ weebụ m zuru oke na mpaghara m ma ọ na-arụ ọrụ, mana ọ bụrụ na m chọrọ ịhụ ya na netwọkụ m na ip nkesa ọ bụghị enwere ike ịnweta, gịnị ka m na-eme?
M ga-enwe ekele maka nkwado gị.
Zaghachi Osman Andrade
Jack JIMMY dijo
Ọ ga-amasị m ka ị nyere m aka site na iji ọtụtụ ihe biko:
1. Achọrọ m ịnọ na ngalaba nke ndekọ na-arụsi ọrụ ike nke ụlọ ọrụ ebe m na-arụ ọrụ mana jiri fedora 22 workstation
Kedụ ka m ga-esi jikọọ na arụ ọrụ ma ọ bụ na ngalaba sava si fedora 22 wkt, yana windo site na desktọọpụ dịpụrụ adịpụ mana na Linux, fedora 22
Daalụ, m ga-enwe ekele
Zaghachi na Jack JIMMY
Ndewo, afọ ole na ole gara aga wụnye 17 Fedora na akwụkwọ ndetu hp mini 110, ọ na-ana batrị ya, mana na mmelite ndị na-esote ruo mgbe m ruru Fedora 23, ugbu a ọ naghị ana ma ọ bụ chọpụta batrị akwụkwọ ndetu, ma ugbu a ọ na-adị mgbe niile na-agwa m na m nwere analọg òké tojupụtara na 0%.
Edwar oke dijo
ebe i nwere ike ibudata installers ma ọ bụ repositories (.rpm) maka feodra 21, Achọrọ m ịwụnye mmemme na sistemụ arụmọrụ a ma na enweghị internet.
Zaghachi Edwar Roa
M na-eji fedora 24 ma ọ dị ka nzuzu ụfọdụ mmemme. Echere m na ihe agahiela. Enwere nhọrọ site na buut disk iji melite sistemụ ma ọ bụ site na ọnụ?
Ọchị: Uwe ejiji (Windows, Mac & Linux)
Pkgs.org, ma ọ bụ otu esi achọta nchịkọta sitere na distros dị iche iche